Vaovao - Manohiza miasa aorian'ny fialantsasatra amin'ny taonan'ny omby
Fanamarinana sy fahazoan-dàlana
Fampivoarana ny orinasa
Sarony feno seza fidiovana antsasa-mivalona
Sarony seza fidiovana ampahefatra
Saron-seza fidiovana fiaramanidina
Ireo dispensera rakotra fipetrahana
Sarona fonenana fidiovana manokana
Toeram-pambolena sy lamba famaohana tisu
Avereno ny asa aorian'ny fialantsasatra amin'ny taonan'ny omby
Androany no andro fiasana voalohany aorian'ny fialantsasatry ny taom-baovao. Ny andro voalohany amin'ny fananganana dia andro nahafaly an'ireo mpiara-miasa rehetra nandoa ny firarian-tsoa ny taona vaovao.
Ny maraina dia tonga tao amin'ny Toilet Seat Cover- Center famokarana am-pitiavana izahay ary niditra tao amin'ny faritry ny birao. Ny zavatra hitanay sy henontsika rehetra dia nanala tsikelikely ireo karazana ahiahy rehetra: avy eo amin'ny fidirana amin'ny valan-javaboary, dia nisy mpiasa manokana handrefesana ny mari-pana, hijerena ny marika ary ny saron'ny sarontava. Rehefa tonga teo amin'ny fidirana amin'ny tranobe faharoa izahay dia mbola mila maka ny mari-pana indray, ary ireo mpiasa mahay dia niditra avy teo amin'ny fantsona voatondro sady mitazona halavirana azo antoka.
Miverina any amin'ny faritra misy ny birao mahazatra, nosokafana mialoha ny fantson-drivotra rehetra, ary hozaraina tsy tapaka amin'ny maraina sy hariva izy ireo; tompon'andraikitra manokana no tompon'andraikitra amin'ny fizarana fitaovam-piarovana toy ny sarontava sy famonoana otrikaretina, ary misy boaty fanodinana maska ​​manokana koa natsangana. Ny mpitarika ny ekipa dia tompon'andraikitra amin'ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny vatana isa-maraina sy atoandro isaky ny modely kely, ary manao fisafoana tsy tapaka ny mpiasa hijerena ny maripanan'ny vatana.
Tamin'ny andro voalohany niverenan'ny asa dia tsy nifindra toerana fotsiny isika fa nahazo fahatokisan-tena bebe kokoa! Samy mandray anjara mangingina amin'ny ekipa ny tsirairay. Ny azontsika atao dia ny manamafy ny fiarovana, manao sarontava, manasa tanana indray ary mitazona halavirana mihoatra ny 1 metatra.
Manomboka amin'ny fisalasalana alohan'ny hiverenany asa, amin'ny fiadanan-tsaina sy fientanam-po aorian'ny faran'ny andro, ny andro voalohany hiverenan'ny asa dia tsy ny fanjakana miasa mahazatra ihany fa ny famerenana amin'ny laoniny ny filaminany tany am-boalohany. Mino aho fa raha mbola miray ho iray isika dia hahatratra vokatra vaovao sy tsara kokoa ary hanompo tsara ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa manerantany!
Fotoana fandefasana: Feb-18-2021
Fengcheng Zhonghe Paper Products Co., Ltd.
Telefaona: + 86-415-8124899
Mailaka: "> tscpaper@163.com
Fax: + 86-415-8124898
Whatsapp: + 86-13889276290
© Copyright - 2011-2021: Fengcheng Zhonghe Paper Products Ltd. Zo rehetra voatokana.
Fonosana fonosana taratasy fidiovana taratasy, Saron-seza fivoahana 1/4 mivalona,